JIRAMA Mandritsara: Mpiasa roa naiditra am-ponja nohon’ny halatra gazoala | JIRAMA
JIRAMA Mandritsara: Mpiasa roa naiditra am-ponja nohon’ny halatra gazoala
Mpiasan’ny JIRAMA ao Mandritsara miisa roa no naiditra am-ponja nohon’ny halatra gazoala ny volana aprily lasa teo.
Miavaka ny lokon’ny gazoala fampiasan’ny JIRAMA raha ampitahaina amin’ireo amidy eny amin’ny paompy
Nivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ilay raharaha halatra gazoalan’ny JIRAMA niseho tany Mandritsara ny volana aprily lasa teo. Mpiasan’ny JIRAMA roa, samy « agent de conduite » no voasazy an-tranomaizina mandritra ny heritaona. Afaka nohon’ny fisalasalana kosa ny mpiasa iray.
Raha tsiahivina, dia tamin’ny alalan’ny fitsinjarana ny fandaniana gazoala isan’andro no nahitana fahabangana eo anelan’ny 120 ka hatramin’ny 150 litatra. Rehefa natao ny fanadihadiana dia olona folo no voarohirohy tamin’ity raharaha ity ka mpiasan’ny JIRAMA ihany no atidoha nikotrika.
Ny mpitantana ny JIRAMA dia miantso hatrany fiaraha-miasa amin’ny rehetra, hampandre ny manam-pahefana raha misy tranga halatra gazoala tahaka izao, izay miteraka fatiantoka goavana ho an’ny orinasa. Tsy mandefitra na amin’iza na amin’iza manao izao asa ratsy izao ny mpitantana ny JIRAMA.